सिल्लल्ट विशेषज्ञले 13 सरल प्रविधिहरूलाई प्रत्येक सफलतापूर्वक व्यवसाय पत्ता लगाउँछन्
केही मानिसहरूको लागि सफलता उठाउने जस्तो लाग्न सक्छबालुवाको एक थलो, तर केहीका लागि यो एक दिनचर्या हो। यो कसरी सम्भव छ?
प्रारम्भिक चरण डरलाई मार्न चाहन्छ, यो प्रश्न गरेर विफलताको अर्थबाट आउँछलगातार र योजना बनाउनु। प्रमुख ग्राहक सफलता व्यवस्थापक सेमील्ट ,इगोर Gamanenko को दावा छ कि अनुभव को वर्ष अमूल्य छ जस्तै तिनीहरू छन्धेरै परियोजनाहरु को प्राप्ति मा योगदान दिए। यहाँ कुन कुरामा थोरौं सुझावहरू छन्व्यवसायमा सफल हुन, कि विशेषज्ञ अनुभव अनुभव मा ड्राइंगSemalt मा उत्पादित कार्य अभ्यास को।
तपाईंसँग विचारबाट प्राप्त गर्न चाहानु भएको एउटा ठूलो तस्बिर हुनुपर्दछचरण अन्तिम कार्यान्वयन र निगरानी गर्न। एकै समयमा, योतपाईं संलग्न गर्न चाहने व्यक्तिहरूको संख्या बुझ्न महत्त्वपूर्ण छ,टेक्नोलोजी तपाईंले काम गर्ने योजना बनाउनुभएको छ, जो वाहन दुवैलाई अनुमति दिन्छमान्छे र प्रविधि। लक्षित ग्राहकहरूलाई परिभाषित गर्नुहोस्, नियन्त्रक प्राधिकरणर मूल्य बेंचमार्क जसले लाभको ग्यारेन्टी वा कम्तिमा स्थिर राख्दछकेहि समय को लागि पहल सम्म तपाईं पनि र उससे परे तोडने को लागि।
तपाईंले विचार म्यापिंगको साथ गरेपछि, सबैको विस्तृत योजनातपाईंको विचारको फरक पक्षहरू सम्पन्न भएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्णकम से कम, सबै लागत निहितार्थ समान समान रूपमा हुनुपर्दछ।यस कठोर प्रक्रिया को सार अझ राम्रो अनुमान गर्न अनुमान छसमय यो तपाईं आफ्नो लक्ष्य जो भव्य थियो पूरा गर्न को लागीअवधारणा को समयमा व्यक्त।
सूचना को जानकारी
निस्सन्देह, तपाइँ केहि विशिष्ट प्रकारका साथ परिचित हुनुपर्दछसूचना, तर यो तपाईंको सफलताको ग्यारेन्टी गर्न पर्याप्त छैन।यसकारण, गहिरो अनुसन्धानको आवश्यकता केहिको रूपमा अपरिहार्य छतथ्याङ्कहरू सुरूवात वा चीजहरूसँग खुला हुन सक्दछन्फरक भयो, र तपाईंलाई थाहा छ।.फेरि, निर्भर गर्दछतपाईलाई आवश्यक जानकारी, जानकारीको व्याख्या गर्नु पर्छउचित हुनुहोस्। अन्तमा, सही जानकारी होधेरै महत्वपूर्ण छ कि, तपाईं गलत बाटो मा संसाधन बर्बाद नहीं गर्छन।
तपाईंले प्राप्त गर्नुभएको जानकारीमा एक सर्वेक्षण गर्नुहुन्छ, यसको मान्य गर्नुहोस्प्राध्यापक र यसलाई अवधारणात्मक लक्ष्य संग संरेखित गर्नुहोस्हामीले पहिले भनेका छौं। प्रमाणिकरणको बेला, स्थिरता होधेरै महत्त्वपूर्ण चाँडै यसको कारणले गर्दा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छgarnered जानकारी को विश्वसनीयता।
जब तपाईं सबै जानकारी संग आउनुभयो,यो हेर्न को लागी केहि समय लागु हुनेछ र हेर्नुहोस्त्यहाँ अझ शक्तिशाली शक्तिहरू छन्उही वा राम्रो परिणाम प्राप्त गर्नुहोस्। तिमि के गर्छौविचार गर तपाइँ लक्षित क्लाइन्टहरू वा विचार गर्नुहोस्ग्राहकहरू पहिलो, लागत, समय वा स्रोतहरू होइनन्।तपाइँले स्पष्ट गरे पछि सबै भन्दा आवश्यक के होग्राहकको सन्तुष्टिको लागि, त्यसपछि तपाईंले विचार गर्नुपर्छलागत, समय र स्रोतको कारक रतपाईंको पहलका लागि उत्तम विकल्पहरू छनौट गर्नुहोस्।
उपलब्ध विकल्पहरूको विश्लेषणको साथ,तपाईं अहिले कुन रणनीतिमा साहसी खडा हुन सक्नुहुन्छकर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनेछ,चासो। तपाईंका सबै विकल्पहरू खडा हुनुपर्दछबाहिर ग्राहक संतुष्टि र समयको बारेमा। नगर्नुहोस्बिर्सनुहोस् कि तपाइँसँग धेरै काम गर्ने स्वतन्त्रता छरणनीतिक समयमा विभिन्न समयमा रणनीतिप्रचलित परिस्थिति। सबैभन्दा महत्त्वपूर्णचीजहरु लाई प्राप्त गर्न को लागि निश्चित रूप देखि स्थायी परिणाम हो।
कोष को स्रोत चुन्नुहोस
तपाईंको व्यवसायी मामला ठूलो मात्रा मा साधन मा छआवश्यक रकम प्राप्त गर्दै। यो पहल र तर्क को तर्क को स्पष्ट अभिव्यक्ति होसबै बाधाहरू विरुद्ध एक विशेष रणनीति अपनाउने कारण। यो समयमै हुनुपर्छर संवेदनशील, सरल र शंकास्पद को स्पष्ट र अस्पष्ट कुनै पनि रूप। धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा,तपाईंले स्रोतहरूलाई प्रयोग गर्नुहुने छ जुन तपाईंको व्यवसायमा नकारात्मक असर पार्दैन, उदाहरणका लागि,एक उच्च ब्याज दर, लामो र जटिल कानुनी दायित्वहरू, को लागि कडा शर्तहरूनिश्चितता। सधैँ पूंजीको पैरामीट्रिक लागतमा कारक हो जसले सबै तरिकाको खाता बनाउँदछजोखिम को लागी र अझै पनि आफ्नो अपेक्षित राजस्व को धारा को भित्र गिर जान्छ।
आफ्नो योजना को अद्यतन
यो तपाईंको धेरै समय र संसाधनहरू कहिल्यै होइनघटनाहरूलाई कम गर्न जसले हानि ल्याउँछ। त्यसोभए केहि समय लिनुहोस् र तपाईले गरेका सबै समीक्षा गर्नुहोस्बितेका दिनहरू, हप्ताहरू र समेत महिनाहरूका लागि। यसलाई सालमा डस्न नदिनुहोस् तर यो गर्छ भने, बनाउनुहोस्यकीन छ कि तपाईं हार नदिनु वा विलम्ब गर्न दिनुहोस।.सायद, त्यहाँ केहि डटिङ हुन सक्छ रक्रस गर्ने। जब तपाईं तिनीहरूलाई भेट्टाउनुहुन्छ, कुनै समय बर्बाद गर्नु आवश्यक छ र अर्को चरणको साथ भेट्नुहुन्छ।
तपाईंको योजना लागू गर्नुहोस्
यो रोलिंग र खेलिरहेको समय होसानो देखि सानो छ किनकी तपाईं कभी नहीं जानते कि के इंतजार मा छ। यद्यपि "योजनाले तपाईंलाई दुई पटक बचत गर्छलागू गर्ने क्रममा धेरै समय "सत्य हो, तर यसले अचम्मको आवश्यकतालाई कहिल्यै बलियो बनायो, त्यसैले यसलाई ढिलो पार्नुहोस्र स्थिर। यसले केही अप्रत्याशित परिस्थितिहरू हुन तुरुन्तै समायोजन गर्न सक्षम पार्दछअन्तर्वार्ता कि अन्तमा, योजनाबद्ध रणनीति र लागू गरिएको रणनीति बीच विचलनधेरै संकीर्ण र नियन्त्रण गरिनेछ।
मनिटर तपाईंको योजना
कुनै सफल व्यवसाय बिना जान्छनिगरानी र नियन्त्रण। त्यो स्थिरता र गुणस्तर आश्वासन को स्मारक हो। को सारअनुगमन गर्न चाँडो सही कदम चाल्नु पर्छ किनकी दूर बाट यो यो देखि हुन्छयोजना, यो अधिक व्यवस्थापन गर्न बडो कठिन छ, र अधिक महंगा व्यापार हुन्छ। Backlogप्रबंधनमा उच्च स्तरको प्राथमिकता समावेश छ; प्रश्न हो: जसको चासो दिइनेछअर्को प्राथमिकता? र अर्को कुरा मनमा आउँछ विवाद
सुधारात्मक कार्य लिनुहोस्
छवि र प्रतिष्ठा सुरक्षित गर्न आवश्यक छव्यापार को साथ साथै लागत, सन्तुष्टि, र संसाधन अधिकतम वृद्धि को रूप मा अन्य कारकहरुआवश्यक सुधारात्मक कार्यहरू। पुनः कार्य, विनाश र दोष मरम्मतको लागि अनुमोदन हुनुपर्छनिर्दिष्ट समय सीमा भित्र बनाइएको छ जुन प्रतिकूल रूपमा सम्पूर्ण व्यवसायिक अवधिलाई असर पार्दैन।
मानिसहरुले तपाईंको व्यवसायलाई थाहा छ
सामाजिक सञ्जाल, मुखको वचनलाई रोज्नुहोस्र तपाईंको व्यवसायलाई बढावा दिनको लागि हरेक अन्य विज्ञापन प्रणाली। यसले बिक्री बढाउँछ र राजस्व वृद्धि गर्नेछलागत धीरे - धीरे गिर जाएगी र लाभ को लामो समय मा बढावा हुनेछ।
निगरानी रोक्न नगर्नुहोस्
अन्तमा, निगरानी नगर्नुहोस् किनकिव्यापार संसार एक अत्यन्त गतिशील छ जहाँ परिवर्तनहरू अपरिहार्य छन्। सक्रिय हुनुहोस्, सिक्न र राख्नुहोस्ज्ञान र कौशल आवेदन। वृद्धि र विस्तार स्वाभाविक रूप देखि आउनेछ, र असामान्यता को अवधारणा ले तपाईंलाई afloat रखेगा।
. - for freerolls